ဇာတ်လိုက်ကျော်များ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဇာတ်လိုက်ကျော်များ	Posted by mm thinker on July 4, 2008
Posted in: Art, Joke.	Tagged: Art, Joke.	စာကောင်းလေးတွေရေးတဲ့ ကလူသစ်ကတောင် အပြင်းတွေများနေပြီလို့ ဆိုလာတယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်း ခုတလော ဘလော့ဂ်လောက ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေဘက် မလှည့်ချင်တာနဲ့ ရေငုံနုတ်ပိတ် ပို့စ်တွေ တင်နေတာ။ အလေးအပေါ့ မမျှဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ခရီးထွက်တော့ တည်းတဲ့နေရာက အင်တာနက်မချိတ်ထားဘူးဗျ။ ဒါနဲ့ အသစ်တင်ထားတဲ့ ၀င်းဒိုးမှာ Paint ကို အသင့်တွေ့တာနဲ့ ပုံပြောင် (ကယ်ရီကေးချား) လေးတွေ ကောက်ဆွဲဖြစ်တယ်။ တခြားသူတွေပုံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ Mg ANT, ကိုဇော်တူး၊ ဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ ဇာတ်လိုက်အသစ် ကိုထေးလင်းအိန်တို့ ပုံတွေပါတယ်။ ဟန်သစ်ငြိမ်ကတော့ “တူတယ်ဗျ”လို့ မြှောက်ပေးထားပါရဲ့။
လောလောဆယ် သင်္ဂပူရနိုင်ငံသို့ ချီတက်နေတသာ မောင်အန့် (www.mgant.iblogger.org)
ဘွဲ့ရ၍ ပြည်တော်ပြန်လေသော ကိုဇော်တူး
ဘလော့ဂ်အကျော် ဟန်သစ်ငြိမ် (www.hanthitnyeim.isgreat.org)
ဇာတ်လိုက်ကျော်အသစ် ကိုထေးလင်းအိန် (နာနိုဆရာ)
ပန်းချီကျော် သင်ကာ Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← ကမ္ဘာမြေ၏ နိဂုံး (The End of the World)	လူမျက်နှာပျောက်တဲ့ လူသားတွေ →	Pages	about